Okujwayelekile - Ama-Absolut Viajes | Ukuhamba kwe-Absolut (Ikhasi 3)
Unyaka Omusha WamaShayina eSydney, iphathi emsulwa
NgoFebhuwari umphakathi waseChina eSydney ugubha uNyaka Omusha waseChina ngomkhosi omibalabala
ICyclamen, imbali yesizwe enephunga lase-Athene
ICyclamen yimbali yasebusika ethandwa kakhulu eYurophu. Olimini lwezimbali, i-cyclamen ifanekisela ...
Inhlanzeko eGibhithe lasendulo
Ukuhlanzeka eGibhithe lasendulo kwakubaluleke kakhulu. AbaseGibhithe lasendulo babegeza izikhathi eziningana ngosuku, besebenzisa amakha anezinto zokwelapha.
Izikhangibavakashi ezizungeze iRoma
Idolobha laseRoma lilodwa likunikeza izindawo eziningi ezithakazelisayo lapho ungajabulela khona futhi ufunde ngomlando, amasiko namasiko asendulo
Abesifazane eGibhithe Lasendulo
Abesifazane baseGibhithe lasendulo babephila kahle. Eqinisweni, bebengeke baphile kangcono. Babenezakhiwo futhi bekwazi ukubusa, phakathi kwabanye.
Vakashela ama-Catacombs eRome - Amahora nezintengo
Amathuna angcwaba eRoma awuhlobo lwemipheme engaphansi komhlaba eyayikade isetshenziswa njengendawo yokungcwaba amaqaba, amaJuda namaKrestu
Amabhishi eMiami anobungani bezinja
IMiami inamabhishi anezilwane ezifuywayo anamapaki ezinja lapho izilwane zingajabulela khona amanzi.
Ukuvakashela iWindsor Castle eNgilandi - amanani namashejuli
IWindsor Castle eNgilandi ingenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zabavakashi ezweni futhi empeleni ithathwa njengesigodlo esikhulu kunazo zonke futhi esidala kunazo zonke emhlabeni.
Umama Wokufika, isikhumbuzo somzwelo eGijón
Umama wokufuduka yisithombe esise-El Rinconín esihlonipha omama bokufika. Indawo enomzwelo kakhulu okufanele ivakashelwe.
I-Amsterdam ekuqaleni yayiyidolobha lamaKatolika ngaphandle kokuphikisana namaProthestani. Ekupheleni kwekhulu le-XNUMX kwavela iSonto Lobu-Orthodox Elivuselelwe.
IDomus Aurea eseRoma
IDomus Aurea eseRome, eyaziwa nangokuthi iGolden House, sekuyisikhathi eside ibhekwa njengenye yezakhiwo ezibabazekayo emlandweni waseRoma.
Izikhungo ezinkulu zokuthenga e-Algarve, ePortugal
Uma uvakashela iPortugal, ikakhulukazi isifunda sase-Algarve, ngezansi sifuna ukukhuluma ngezikhungo ezinkulu zokuthenga ongazithola kule ndawo.
I-Kheer, i-dessert eyisithonjana kunazo zonke eNdiya
I-Kheer, eyaziwa nangokuthi i-Payasam noma i-Payesh, iwuswidi ojwayelekile waseNdiya olungiselelwe ngelayisi ...
Amasiko kaKhisimusi e-Austria
Amanye amasiko kaKhisimusi amahle kakhulu e-Austria
Ezweni loFaro singalalela umculo wesintu, esizuzwe njengefa kusuka ezizukulwaneni ezedlule, ezikwenza uphuphe kumanothi okuqala.
I-Vienna, idolobha elihle kakhulu lesidlo sasekuseni
Uhlu lwamakhefi eVienna lapho ungathola khona konke ukudla kwasekuseni
Amasiko nezinkolelo zenkolo eHong Kong
Amasiko, izinkolelo zenkolo kanye nengokomoya kudlala indima ebaluleke kakhulu ezimpilweni zabo bonke abahlali baseHong Kong, noma ngabe bavakashela indawo yezenkolo.
Izikhumbuzo ezifanele eCroatia
Ngenxa yalokho, kunezikhumbuzo ezifanele eCroatia ezisukela emasontweni kuye ezigodlweni, ezakhiwa kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene ezintsha.
IPortugal, abantu bayo nolimi lwayo
IPortugal izwe elihle, elinamabhishi amahle, amasayithi omlando, amasiko namasiko, izinto izivakashi eziza kuleli ezithandayo minyaka yonke. Isici esibaluleke kakhulu ngabantu baso nolimi lwaso.
Inini imisebenzi yezenkolo yaseVienna Cathedral
Imininingwane mayelana nezikhathi zenqwaba yeCathedral yaseSan Esteban
Ezinye izinhlobo zoshizi lwesiDashi
Ukukhiqizwa koshizi mhlawumbe kungukuphela komkhiqizo okwazi ukuphikisana nezinhlobonhlobo zama-tulips. Lapha sikwethulela ibhulashi lalabo ozobathola.
Injani imfundo eGibhithe?
Imfundo eGibhithe lasendulo iveza amabanga amade kusuka ohlelweni lwemfundo lomphakathi wethu namuhla. Ekuqaleni…
Inkosi Yenkawu Enesibindi
IMonkey King ingomunye wabalingiswa abathandwa kakhulu ezinganekwaneni zaseChina
Izinzuzo nezingozi zokuhlala eHong Kong
Ukuhamba noma kuphi emhlabeni kuhlala kunezinzuzo nezingozi zako. Sizokhuluma nawe ngqo mayelana nobuhle nobubi bokuhlala eHong Kong
Izingane eziguquliwe, izingane zama-fairies
Izinganekwane zase-Ireland zikhuluma "ngezingane ezishintshile", izingane ezishintshwa izingulube ezinganeni zabantu futhi ezingenayo imizwa
Imbali ye-lotus eGibhithe lasendulo
Sike sakhuluma ngokubaluleka kwezimbali ezingadini zaseGibhithe lasendulo. Imbali yeLotus ngu ...
ISonto LaseDomine Quo Vadis, elise-Appian Way
ISonto LaseDomine Quo Vadis yisonto lasendulo elise-Appian Way lapho kuthiwa khona uPetru wabona uJesu
10 iminyuziyamu yamahhala eMilan
Kulesi sihloko sikwethulela iminyuziyamu eyi-10 eMilan ongangena kuyo ngaphandle kokukhokha
Vakashela iKorinte lasendulo
Imininingwane yokuvakashela amanxiwa eKorinte lasendulo
Izingubo ezijwayelekile zase-Austrian
Izingubo zikaDirndl kanye nelederhosen yizembatho ezijwayelekile zase-Austrian
Landela umzila wemigudu engama-52
Umzila Wemihubhe engama-52 ungomunye wemizila yokuhamba izivakashi e-Italy
Umjikelezo Wamatshe kaDrombeg
IDrombeg Circle of Stones ingelinye lamasayithi e-megalithic athandwa kakhulu eCork nase-Ireland
UFayay, uphayi odumile wase-Arab
I-fatay patty ithandwa kakhulu emhlabeni wonke. Zenziwe ngenyama egayiwe entsha, ulamula, utamatisi, ...
Ithempeli leMedical Minerva
Ithempeli laseMinerva Medica, elisendaweni yase-Esquilino, liyisakhiwo esivela ngekhulu lesi-XNUMX futhi, okuxakayo ukuthi, sasingelona ithempeli elinjalo
Amaswidi ajwayelekile ukuwajabulela eGibhithe
Ngubani owathi eGibhithe awekho ama-dessert amahle nezitsha ezinoshukela? Okulandelayo sizokwazi amanye ama-dessert amaningi ...
UMkhosi Wokulangazelela Wenyoka, eCocullo
ECocullo, esifundeni sase-Abruzzo, uMkhosi weNyoka onelukuluku wenzeka minyaka yonke, idili lobuzali
Uphudingi omnandi omnandi
I-cuisine yaseSwitzerland idili lamapulangwe afunwa kakhulu. Ihlangana ngokuvumelanayo amathonya aseJalimane, eFrance cuisine ...
Ezinye izithombe ezifanele ezivela eGijon
Sikhuluma ngezithombe ezintathu ezimele idolobha laseGijon: i-Elogio del Horizon, iMonumento a la Solidaridad neSombrs de luz.
IVanillekipferl, amabhisikidi ajwayelekile ase-Austrian
IVanillekipferl ngamakhukhi ajwayelekile amnandi adliwa ngoKhisimusi e-Austria
I-Yuca ene-mojo, ukudla kwaseCuba
I-Yucca ene-mojo isidlo esijwayelekile se-gastronomy yaseCuba
Uphudingi waseRussia ojabulisa izinyo elimnandi
I-cuisine yaseRussia ithandwa ngezitsha zayo ezinoshukela, okuyizitshulu nezinhlayiya zazo ezigqame ikakhulukazi ...
Jabulela imikhiqizo ejwayelekile yaseVenezuela eholidini
IVenezuela inikela ngemikhiqizo ehlukile ukujabulela i-gastronomy enhle.
ISahluko se-Saint Aquilino eSontweni LaseSan Lorenzo Maggiore
Ngaphakathi kweSonto LaseSan Lorenzo Maggiore kukhona iSahluko seSan Aquilino nemidwebo yaso yangekhulu lesithupha
Inganekwane yobhejane weTorre de Belém
ITorre De Belém kanye nendaba engemuva komsebenzi wobuciko obunjengebhejane ngaphezulu kombhoshongo
Abalingisi base-Ireland bayenza ibe nkulu eHollywood
UColin Farrel, uLiam Neeson noPierce Brosnan baphakathi kwabalingisi base-Ireland abanqoba eHolyywood
IFilarete Tower eSforzesco Castle
ITorre del Filarete ingumbhoshongo omude kunayo yonke futhi obaluleke kunayo yonke weSforzesco Castle
Isibhedlela saseSan Michele
Eyakhelwe ngekhulu le-XNUMX, iHospice yaseSan Michele isebenze kuwo wonke umlando wayo njengendawo yokukhosela, ijele nendawo yezintandane
Izinganekwane ZaseJapane ZaseDolobheni - Intombazane yaseHole
Intombazane esemgodini ingenye yezinganekwane ezisabisa kakhulu zaseJapan. Lapha sikutshela ukuthi imayelana nani.
UJulia Tuttle, owesifazane owazala uMiami
Idolobha laseMiami lazalwa ngenxa yowesifazane onombono nesithembiso asenza. UJulia Tuttle ungumama kaMiami.
Ubusuku baseSan Juan eBadalona
NgoJuni 23, uBadalona ugubha ubusuku baseSan Juan olwandle: umlilo, amanzi, umculo, izoso kanye nabantu abaningi ukujabulela ubusuku bemilingo.
I-Tamiya Plamodel Factory, isitolo sangempela semodeli yamaphupho
ITamiya Plamodel Factory isitolo esisesifundeni iShinbashi eTokyo lapho sizothola khona izinkulungwane zamakhithi womhlangano oyisibonelo.
Ama-cantes ohambo lokubuya, uphawu lweCaribbean e-flamenco
Umculo waseCaribbean nowaseLatin America uthonye umculo we-flamenco. Sibuyekeza i-guajira, i-rumba kanye ne-Colombian.
UMilan noNapoleon Bonaparte
Kulesi sihloko sithatha indlela emfushane enqamula ezikhumbuzo ezakhiwa eMilan ngesikhathi sikaNapoleon Bonaparte.
Umdanso weSirtaki, odumile kepha hhayi owesiko
Umdanso weSirtaki, umdanso odumile wamaGrikhi
Izindawo ezihamba phambili ze-ayisikhilimu eMilan
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yimaphi amakamelo amahle kakhulu endabuko e-ayisikhilimu eMilan, lawo esikhathi sokuphila konke
Amakhambi nezinongo esingazithola ePhilippines
I-cuisine yasePhilippines isebenzisa izinongo namakhambi amaningi ahlukahlukene ekuchazeni kwawo okupheka, amanye awo amnandi ngempela.
Izintshisekelo zaseRussia, izinsuku zokuzalwa, iziphuzo nemiyalezo
Izintshisekelo zaseRussia namasiko ukuqonda kangcono indlela yabo yokuxhumana nokudlulisa imizwa nothando
Thola ipasipoti yaseCroatia evela phesheya
Kulokhu okuthunyelwe sichaza izinqubo ozidingayo ukuthola ipasipoti yakho yaseCroatia uma uhlala phesheya.
Imikhosi yamasiko ehamba phambili e-Australia
Imicimbi yamasiko ehamba phambili nemikhosi e-Australia, idolobha ngedolobha
Amanye ama-movie aqoshwe emathafeni aseGrisi
Amanye ama-movie aqoshwa eGrisi
Ukushukuma komzimba okufuna ukwazi e-Australia
Kukhona ukushukuma komzimba okwenziwa ngaphandle kwezinhloso ezimbi nganoma yisiphi isikhathi, noma kunezindawo lapho lezo ezingabonakala zingejwayelekile kithi zingahloniphi.
Umkhosi We-Rolling Cheese
Phakathi kwemikhosi eminingi eyenzeka unyaka wonke eNgilandi, iRolling Cheese Festival iyagqama.
La michetta, isinkwa saseMilan
IMichetta yisinkwa esaziwa kakhulu eMilan, yize eminyakeni yamuva ingasenziwa kakhulu njengakuqala
Izindlela zokuhamba eNetherlands
Enye yezindlela zokuhamba ezaziwa kakhulu eNetherlands ibhayisikili, yize isitimela nebhasi nakho kudumile.
Zenzele amaqanda ama-Easter amaGreek abomvu
Amaqanda abomvu, isiko lePhasika eGrisi
ISonto LaseSanta María linikeza iSan Satiro
ISonto LaseSanta Maria Presso San Satiro, kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX, lingenye yezinto ezithakazelisa kakhulu enkabeni yeMilan
Insika Engummangaliso Yensimbi yaseDelhi
Insika yeNsimbi yaseDelhi yisikhumbuzo esiseQutb Complex, enkabeni yeQuwatul Mosque edolobheni laseNew Delhi.
Imnyuziyamu Yemfashini Esigodlweni saseMorando
Isigodlo saseMorando, esakhiwe ngekhulu leshumi nesikhombisa, sinegalari yobuciko kanye neMnyuziyamu Yemfashini
Imifudlana yoMfula iGanges
Namuhla sizokwazi eminye yemifula ebaluleke kakhulu yoMfula iGanges. Ake siqale ngokusho uMfula i-Alaknanda, umfula osezintabeni zaseHimalaya ...
UJulia Curia Esithangamini SamaRoma
ICuria Julia ingesinye sezikhumbuzo ezigcinwe kahle eSithangamini SamaRoma. Kwakuyisakhiwo lapho amaseneta ahlangana khona ngesikhathi se-republic
Ijele laseSan Vittore
Lavulwa ngo-1879, ijele laseSan Vittore ngelinye lamajele amakhulu e-Italy
Izici Ezimbi Zesistimu Yezemfundo eNdiya
Namuhla sizosho ukuthi kungani uhlelo lwemfundo yamaNdiya lungeyona ehamba phambili. Iphuzu lokuqala lokuba ...
Izindawo ezihamba phambili zokudonsela eMiami
IMiami yaziwa umhlaba wonke ngokuba yi-International Capital of Diving ngoba inezindawo eziningi ...
Izindlela zokuhamba izintaba eSweden
I-Kungsleden (»King's Way») iyindlela yokuhamba izintaba enyakatho yeSweden, cishe ...
IPortugal, umhlaba wemikhosi
Iphathi yeCarnival ePortugal yisikhathi esimnandi nesijabulisayo esiqala ngoFebhuwari. Kuyiphathi…
INayile, i-oasis yasogwadule
Esinye sezigodi zemifula ezinhle kakhulu emhlabeni yiMfula iNayile omuhle, ingxenye yawo ...
Amabhishi ayizintandokazi eGibhithe
Amazwe amaningi aseNyakatho Afrika athokozela indawo ethandekayo olwandle. Ezinye izivakashi ziya eMorocco, ...
Izesekeli ezisetshenziswa ngabesifazane baseNdiya
Namuhla sizohlangana nezesekeli ezivame kakhulu zabesifazane baseNdiya. Ake siqale ngokubalula ...
Ziyini izimbangela ezidumile zokufa eNdiya?
Yize kuyiqiniso ukuthi izimbangela ezi-5 eziphezulu zokufa kwabantu eNdiya yisifo senhliziyo, i ...
Izimbangela Eziyinhloko Zokufa eNdiya
Kulesi senzakalo sizokwethula isikhundla sezimbangela ezinkulu zokufa eNdiya: Izifo zeCoronary ezaziwa nangokuthi ...
Abadwebi Abavelele BaseNdiya
Kulesi senzakalo sizokwazi ukuthi obani abadwebi abavelele eNdiya. Ake siqale ngokubalula Abanindranath Tagore, ethathwa njenge ...
Amaphiramidi amakhulu kunawo wonke eGibhithe
Idume emhlabeni wonke, amaphiramidi aseGibhithe akhanga kakhulu izivakashi aheha amashumi ezinkulungwane ...
ISala delle Asse eSforzesco Castle
Ngaphakathi kweSforzesco Castle kuneSala delle Asse, egcina omunye wemidwebo ethakazelisa kakhulu kaLeonardo da Vinci
Izindawo Ezinhle Zokukhempisha eFlorida: Fort De Soto Park
Amatende azungezwe ubuhle bemvelo ngumsebenzi ofanele wonke umndeni. Uma kuyisifundazwe saseFlorida, ...
Izintaba eSerra da Arrábida Natural Park
ISerra da Arrábida Natural Park, etholakala eningizimu yeLisbon, ihlala amakhaya amaningi ...
Izipho ezinhle kakhulu zokuthenga eSweden
Ucabanga ngokuvakashela eSweden? Noma ingabe uhlala eSweden futhi udinga okuthile ongakuthumela ekhaya ...
3 izindawo ukuvakashela eGibhithe
IGibhithe izwe eligxile emlandweni, likwenza indawo ephezulu izivakashi ezizo ...
Melomakarona, super sweet
IMelomakarona, uswidi ojwayelekile wamaGrikhi kaKhisimusi
Izibhedlela ezinkulu eNdiya
Ngalesi sikhathi sizokwazi izibhedlela ezinkulu eNdiya. Ake siqale ngokusho ngecala likaSir Ganga Ram ...
Abapheki Abadumile baseNdiya
Namuhla sizohlangana nabapheki abadume kakhulu eNdiya. Ake siqale ngokusho uVikas Khanna, umpheki owazalelwa e ...
Abapheki Abadumile base-Australia
Kulesi senzakalo sizohlangana nabapheki abadume kakhulu e-Australia. Ake siqale ngokusho uMarion Grasby, owazalwa ngo-1982 e ...
Ama-DJ amahle kakhulu wase-Australia
Ngalesi sikhathi sizohlangana noDJ ababaluleke kakhulu e-Australia. Ake siqale ngokubalula uGeorge Kordas, owaziwa kangcono njengo ...
Ama-Rock Bands ahamba phambili e-Australia
Lesi sikhathi sizohlangana namaqembu amakhulu e-rock ase-Australia. Ake siqale ngokusho iJet, iqembu lamatshe avela ...
Izizathu zokuya ePortugal ebusika
IPortugal iselinye lamazwe aseYurophu ashibhile ukuvakashelwa, ikakhulukazi ngenkathi ephansi, okuyi ...
I-Unicredit Tower, isakhiwo eside kunazo zonke e-Italy
I-Unicredit Tower, engamamitha angu-231 ukuphakama, njengamanje iyisakhiwo eside kunazo zonke e-Italy nasendlunkulu yamanje yebhange lase-Italy i-Unicredit
Udla ini ngoKhisimusi eHolland?
Imindeni eminingi yamaDashi ikuthatha ngokungathi sína kakhulu ukulungiselela isidlo sasebusuku sikaKhisimusi. Lokhu kudla kungafaka inyama evela ...
ILa Porta Pía, umsebenzi wokugcina kaMichelangelo
Namuhla sivakashela iPorta Pía, isango lodonga lwase-Aurelian lasendulo, umsebenzi wokugcina wokwakha owenziwa nguMichelangelo esaphila
Umlando wefulegi laseGibhithe
IGibhithe kungenzeka ukuthi yimpucuko endala kunazo zonke emhlabeni eshiye iNayile Valley, cishe i-3100 ...
Ukudla Kwendawo YaseTasmania
Uma udlula eTasmania awukwazi ukuyeka ukunambitha eminye imikhiqizo yasendaweni. Ake siqale ngokusho i-wasabi, isithako esiyisisekelo ...
Angobani amaNdiya ahlonishwa kakhulu?
Ngalesi sikhathi sizothola ukuthi angobani amaNdiya amahle kakhulu. Ngaphandle kokungabaza kufanele siqale ngokubalula uSalman Khan, ...
Amaski aseChina, okuyingxenye yobuciko bendabuko
Amaski wama-opera amaShayina
Izicathulo zokhuni zaseDashi
Izicathulo zokhuni? Ifa elijwayelekile laseDashi? Cishe akekho noyedwa umuntu ongasinika ...
Cotoletta iresiphi a la milanesa
Namuhla sikunikeza iresiphi ye-Milanese cotoletta, esinye sezitsha ezijwayelekile kakhulu zokupheka kweMilan.
Umlando WeNdiya Yasendulo: Abantu Bokuqala, Ama-Aryan neBrahmanism
I-India iyinhlonhlo enkulu yase-Asia, isifunda esikhulu okwathi kusukela endulo kwaba yimpucuko ekhanyayo….
Izikhumbuzo Zomlando zaseNdiya
Namuhla sizovakashela izikhumbuzo zomlando ezibaluleke kakhulu eNdiya. Ake siqale ngokukhomba icala leTaj ...
Iminikelo Ebalulekile evela eNdiya
Ake sifunde ngeminye yeminikelo ebaluleke kakhulu i-India esinike yona. Ake siqale ngokusho isihloko sezibalo. India ...
Abesifazane BaseNdiya Abalwela Inkululeko
Ngalesi sikhathi sizohlangana nabesifazane abalwela inkululeko ababaluleke kakhulu eNdiya. Ake siqale ngokubalula uRani ...
ISonto LabaPhostoli AbayiShumi Nambili eKremlin
Ngo-1653, uMbhishobhi omkhulu u-Nikon wayala ukuthi kwakhiwe indawo yokuhlala enhle, eminyakeni emithathu kamuva isakhiwo sasi ...
Isikhathi sokuqala esibalulekile sokwakhiwa kwezakhiwo zaseDashi sasikhona ngesikhathi seDutch Golden Age kusukela ekuqaleni ...
Izinyoka ezinobuthi kakhulu zihlala e-Australia
E-Australia singathola ezinye zezinyoka ezinobuthi kakhulu emhlabeni. Isibonelo, ake siqale ngokusho i-Tiger Snake, ...
Yimaphi amadolobha anabantu abaningi e-Australia?
Ngalesi sikhathi sizohlangana namadolobha ahlala abantu abaningi e-Australia. Ake siqale ngokusho iSydney, eNew South Wales, idolobha ...
Lesi sikhathi sizohlangana nezizwe ezibaluleke kakhulu zaseNdiya. Ake siqale ngokusho amaBodo, ubuhlanga ...
Isikhathi esihle kakhulu sokuntweza olwandle ePortugal
Ngamakhilomitha angama-450 olwandle lwase-Atlantic, uchungechunge lwamabhishi amahle angonakalisiwe namanye amagagasi amahle kakhulu ...
Amahora amathuna aseBadalona ngosuku lwabo bonke abangcwele
Amahora okuvula amathuna ngosuku lwe-All Saints.
Izimakethe zomgwaqo eMilan
Namuhla sazi ezinye zezimakethe zomgwaqo ezinkulu ezibanjwa masonto onke emigwaqweni nasezigcawini zaseMilan
UPrego, isemishi lesiPutukezi
Ezitolo zokudlela zesiPutukezi kuvamile ukuphaka i- "prego" ethandwayo, isemishi ngesiPutukezi. Akuyona nje isangweji nje ...
Izimpi Nezimpi ZaseNdiya
Namuhla sizofunda ngezimpi nezimpi ezibaluleke kakhulu eNdiya. Ake siqale ngokukhomba kwi-Battle of Plassey ...
Izimpi ZaseNdiya Yasendulo
Lesi sikhathi sizokwazi ezinye zezimpi ezibaluleke kakhulu nezimpi zaseNdiya yasendulo. Ake siqale ngokusho ...
Yiziphi izifundazwe ezintsha kakhulu zaseNdiya?
Lesi sikhathi sizokwazi ukuthi iziphi izifundazwe zakamuva kakhulu zaseNdiya. Ake siqale ngokusho iChhattisgarh, state ...
Izizwe ezinabantu abaningi kakhulu eNdiya
Namuhla sizokwazi ukuthi iziphi izifundazwe ezinabantu abaningi kakhulu eNdiya. Ake siqale ngokusho iBihar, ...
Amabhishi ahamba phambili wezingane eMiami
Alukho uhambo oluya eSouth Florida oluzophela ngaphandle kosuku olwandle. Ngalo mqondo, uma ngazi ...
Namuhla sikulethela iresiphi yepanzerottis, isikhalazo esivame kakhulu kulo lonke elase-Italy, ikakhulukazi eningizimu yezwe naseMilan.
Ababhali Abakhulu Bezincwadi ZaseNdiya
Izincwadi zaseNdiya zingenye yezinto ezibaluleke kakhulu futhi zasendulo emhlabeni. Kuyaphawuleka ukuthi izincwadi zamaNdiya ...
Ama-Novelists ahamba phambili e-Australia
Ngalesi sikhathi sizohlangana nababhali bamanoveli base-Australia abahamba phambili. Ake siqale ngokusho uKate Morton, umbhali wamanoveli oshicilele ...
Namuhla sizohlangana nabaholi bezomlando abakhulu kunabo bonke baseNdiya, abadumile futhi abathandwayo hhayi kuphela e ...
Lesi sikhathi sizokwazi ukuthi yiziphi izindawo ezingcono kakhulu zokuthenga online online eNdiya. Ake siqale ngokusho ...
Namuhla sizokwazi ukuthi yimiphi imikhiqizo eyisisekelo ethunyelwa kakhulu eNdiya. Ake siqale ngokubalula izinto zokubasa ezimbiwa phansi, ...
Abaculi base-Australia bama-80s
Namuhla sizokwazi ukuthi yibaphi abaculi base-Australia abahamba phambili ngama-80's. Ake siqale ngokubalula i ...
Imibukiso ye-TV edume kakhulu eNdiya
Kulokhu sizokwethula imibukiso nethelevishini ethandwa kakhulu kuthelevishini yaseNdiya. Ake siqale ngokusho ...
Amabhayisikobho e-Bollywood aphezulu kakhulu
I-Bollywood ingenye yezimboni ezinamandla kakhulu ku-cinema. Njalo ngonyaka kwenziwa amakhulukhulu amafilimu akhiqizwa ...
Yiziphi izithuthuthu ezithengisa kakhulu eNdiya?
Kuyaziwa ukuthi enye yezindlela zokuhamba ezithandwa kakhulu eNdiya izithuthuthu, yingakho…
Amadolobha aseNdiya angcoliswe kakhulu
Sazi kahle ukuthi i-India yisizwe esinezinga eliphakeme lokungcola kwemvelo, kokubili umoya namanzi….
Ukudla kuyinhliziyo yawo wonke amasiko, futhi i-United States ayihlukile. Njengezwe ...
Amabhayisikobho amahle kakhulu eSweden asikhathi sonke
ISweden Film Institute isanda kukhipha uhlu lwamafilimu amahle kakhulu ...
Amasiko namasiko eCanary Islands
Iziqhingi zaseCanary zinamasiko namasiko acebile, amaningi awo afaka nomkhosi odumile. Amadili ...
Ukungcola komhlaba kubangelwa uchungechunge lwezizathu njengokugawulwa kwamahlathi e-Amazon ...
Amasonto Amakhulu aseManizales
Ukuvakasha kwamasonto amahle kakhulu edolobheni laseManizales, isampula yezakhiwo ezicebile zenhlokodolobha yaseCaldense
Inkukhu ye-Kung Pao (Ukulungiselela)
Khuphukela eTerrace yaseDuomo eMilan
Okunye ukuvakasha okubalulekile okufanele ukwenze eMilan ukukhuphukela eTerrazas del Duomo bese ucabanga ngemibono
Isobho lamaqanda amaShayina
Ukudla kwasekuseni kwesiGreki
Linjani ibhulakufesi eGrisi
Abaculi Abadumile base-Australia Emhlabeni
Namuhla sizokhuluma ngabaculi abadume kakhulu e-Australia emhlabeni jikelele. Ake siqale ngokubalula u-Andy Gibb, owayeyilungu le ...
Abantu baseDashi bayakhula futhi babe nempilo
Isisindo esilinganisiwe samadoda nabesifazane eNetherlands sikhuphuke ngokushesha kakhulu emashumini amabili edlule ...
Amamephu ezokuthutha alandekayo eDublin
Landa amamephu ezokuvakasha kuwebhusayithi yezokuvakasha yaseDublin
Izindlela zokupheka zasePutukezi: iSapateira Recheada
Izinhlobonhlobo zokudla kwasePutukezi kusekelwe kokunambitheka kwaseMedithera lapho i-protagonist iyizinhlanzi ngakho ...
Ingadi yaseJapan e-Ireland
UTully, ingadi yaseJapan e-Ireland
Ubumba olumhlophe noluluhlaza okwesibhakabhaka lwaseChina, olwaziwa kakhulu
Ubumba lwaseChina olumhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka lungelinye lamapulangwe aseChina athandwa kakhulu emhlabeni.
Izembatho zendabuko zase-Austrian
Ingubo kaDirndl kanye nemvunulo kaLederhosen, izingubo ezijwayelekile nezendabuko zase-Austrian
Inganekwane ka-Aisha Kandisha
Inganekwane yemvelaphi yaseMoroccan inomlingiswa wayo u-Aisha Kandisha, isidalwa somlingo nesesimame esihlala emithonjeni, ...
I-Char Siu Bao (ama-Chinese steamed buns)
Inhlama Yebunsi Ebilisiwe (isinkwa)
I-Jiaozi (ravioli yaseChina)
Iziphuzo ezidumile zaseNdiya
Ngalesi sikhathi sizokhuluma ngeziphuzo ezithile ezidumile ezivela eNdiya. Ake siqale ngokusho iNimbu Pani, isiphuzo ...
Izindawo zokuthenga noma zokuqasha imvunulo eMiami
Amaqembu enetimu awagcini nje kuphela edolobheni laseMiami, kodwa futhi aphakathi kwalabo abafiswa kakhulu phakathi ...
Amabhubesi ethusi e-HSBC
I-Arch of Triumph eMoscow
NgoMeyi 9, 1945, iMpi Yesibili Yomhlaba yaphela futhi kusukela lapho, minyaka yonke, i ...
Abalingisi abadumile baseNdiya nabalingisi baseHollywood
Akungabazeki ukuthi i-Bollywood yenze ukuba khona kwayo kuzwakale emhlabeni wonke. Ama-actress amaningi nabalingisi ...
Yimaphi ama-movie omdanso ohamba phambili we-Bollywood?
Lesi sikhathi sizohlangana nama-movie wokudansa amahle kakhulu we-Bollywood. Ake siqale ngokusho iDisco Dancer, a ...
Ama-Movie we-Bollywood Series B
I-Bollywood yaziwa ngokwenza impumelelo enkulu kwezentengiso, kepha sithola nama-movie ochungechunge B. Ake sazi ukuthi yini…
Abaqondisi Ababalulekile beCinema yaseNdiya
Lesi sikhathi sizokwethula kwabanye babaqondisi ababaluleke kakhulu bebhayisikobho yaseNdiya. Ake siqale ngokusho uGugu ...
Ukubukwa kwemikhomo eNorway ehlobo
Uhambo lokubona imikhomo nezinye izilwane eNorway.
Umphakathi waseDashi ulingana futhi unamuhla. Abantu banesizotha, bayabekezela, bazimele, bayakwazi ukuzimela futhi banamabhizinisi. Bayayazisa imfundo, ...
ILoftus Hall, enye yezindlu zase-Ireland
ILoftus Hall, indlu e-haunted yase-Ireland
Yimaphi amagama amantombazane athandwa kakhulu e-Australia?
Lesi sikhathi sizokwethulela amagama athandwa kakhulu amantombazane e-Australia. Kumele uqaphele ...
Izingoma ezidumile zase-Australia
Lesi sikhathi sizokhuluma ngezingoma ezidume kakhulu e-Australia. Ake siqale ngokubalula i-True Blue kaJohn Williamson, ingoma ...
Izidingo zokushada eNgilandi
Ukushada eLondon kufana nokushada e-United States. Lo mbhangqwana ungaba nomkhosi womphakathi noma ...
I-Easter lingenye yamaholide obuKristu abaluleke kakhulu agujwa emhlabeni wonke ngentshiseko enkulu ...
ILady of Death, inganekwane yase-Ireland
UBanshee, iNenekazi Lokufa
IJapane ithola "umhlaba ongajwayelekile" olwandle lwayo
IJapan ithole amadiphozithi "omhlaba angajwayelekile" olwandle lwawo ngamamitha ayi-5.800 ukujula.
Yimaphi amanoveli amahle kakhulu nge-Australia?
Ungumuntu othanda ukufunda futhi ufuna amanoveli amasha ozowafunda? Ngabe unentshisekelo kukho konke okuhlobene ...
Enye i-movie ehlekisayo evela kubhayisikobho waseChina
Uhambo oluya eNtshonalanga, Ukunqoba Amademoni, Enye I-Chinese Action Comedy
UFarsala halva, iresiphi yasendulo yesiGrikhi emnandi
UFarsala halva, i-Greek gastronomy
Ukusetshenziswa kwethusi eChina yasendulo
Umlando wokusetshenziswa kwethusi eChina
IYunivesithi yaseCairo itholakala eGiza, ithathwa njengesikhungo esihle kakhulu sokufunda ezweni ebesilokhu ...
IMetropolitan Cathedral yase-Athene
IMetropolitan Cathedral yase-Athene, isonto lenhlokodolobha yaseGrisi
Inkundla, imbeleko yobuhle bezemidlalo yamaGreki asendulo
Inkundla, esinye sezizinda zobuhle bezemidlalo zamaGrikhi asendulo
Izitolo zekhofi ezindala kunazo zonke e-Amsterdam
Inhlokodolobha yaseDashi inikezela ngamaKhefi "amadala kakhulu" okuthi, uma esengaphakathi, athuthe isivakashi eziningana ...
Amabha lapho insangu ibhenywa khona e-Amsterdam
Kunemigoqo ethile e-Amsterdam lapho kuvunyelwe khona ukubhema insangu, kepha akuzona ezitolo zekhofi. Umuntu angaba nobhiya ...
ILion Dance, ejwayelekile kwezinganekwane zaseChina
Umdanso webhubesi, umdanso ojwayelekile waseChina
Yimaphi amaqembu omculo ahamba phambili e-Australia?
Ngalesi sikhathi sizohlangana namaqembu omculo ahamba phambili e-Australia. Ake siqale ngokukhuluma ngoRussell Crowe neThe ...
Izembatho eGibhithe lasendulo
Isimo sezulu saseGibhithe namakhaza aso ashisayo nobusika obumnandi bekuthanda ukusetshenziswa kwezingubo ezilula ezenziwe ngemicu ...
Obani oDJ abahamba phambili eNdiya?
UDJ noma iDisc Jockey umuntu owenza umculo orekhodiwe wabalaleli, ekilabhini, ezindaweni zokuphuza utshwala, kuma-disco naku ...
Ukususwa kwezinwele kwazalelwa eGrisi
I-Waxing isiko elivela kubantu be-cavemen, kunobufakazi bokuthi amadoda asebenzise ...
IDe Bazaar, imakethe enkulu kunazo zonke yangaphakathi eHolland
IDe Bazaar iyophahla lwesuphamakethe olukhulu kunawo wonke eYurophu oluseBeverwijk, idolobha lase ...
Obani abaculi abahamba phambili eNdiya?
Ngalesi sikhathi sizohlangana nabaculi abahamba phambili eNdiya. Ake siqale ngokubalula uMohammad Rafi, umculi ocatshangelwayo ...
Yiziphi izinto zokuthenga eNdiya?
I-India yipharadesi lokuthenga. Lapha ungathola izindatshana ezahlukahlukene, kaningi ezenziwe ngezandla, ...
Abalingisi abayishumi abahle kakhulu eJapan
Faka kuhlu nabalingisi abayishumi abahle kakhulu eJapan.
Umlando woshizi ku-Chinese gastronomy
Amahhotela lapho ungabhema khona insangu e-Amsterdam
I-Amsterdam, eyaziwa ngezindawo zayo ezilingayo njengeRed Light District kanye nezitolo zayo zekhofi, iheha i…
IHolland nezinqaba zayo zasendulo
Izikhumbuzo zomlando wazo ocebile zivelele yonke indawo, imvamisa zisasebenza nsuku zonke, njengamakhulu eminyaka ngaphambili. Kuvuliwe…
Imikhiqizo ejwayelekile yeMykonos
Imikhiqizo ejwayelekile yesiqhingi saseMykonos
Okuphuzi, umbala wobukhosi
Umlando wokusetshenziswa kombala ophuzi eChina
Idili laseSan Antonio esifundazweni saseCastellón, isiko nomlilo
Umkhosi weSant Antoni ugujwa ngoJanuwari 17 kanti imicimbi yokumhlonipha ihlelelwe ngalolo suku, ngezimpelasonto ezandulela, ngemuva, noma kuze kuphele kuze kube uFebhuwari. Iqiniso ngukuthi bambalwa omasipala esifundazweni saseCastellón abangawugubhi umkhosi weSant Antoni. Iningi lomasipala lihlela imicimbi yokuhlonipha lo ngcwele, usanta wezilwane, onezimpande ezijulile ezweni lasemakhaya futhi osaphila ngokwesiko lethu lesimanje, kwesinye isikhathi uphambuke kancane ezinhlosweni zokhokho babo futhi kwezinye izimo agcine konke umnyombo wamasiko agcinwayo futhi afunwa ngomasipala baseCastellón njengezimpawu zangempela zobunikazi.
Okudingayo ukwazi ngaphambi kokuya eSweden
ISweden yabelana ngemingcele yayo neFinland, iNorway neBaltic Sea. IsiSwidi ulimi olusemthethweni lwaseSweden futhi luyilungu…
Ukwakhiwa kwesimanjemanje kwesi-Dutch
Ukwakhiwa kwesimanje e-Eastern Docklands, e-Amsterdam Eminyakeni eyi-15 edlule, iHolland isibe ...
U-Ondense Manuel Alfonso Ortells, inkumbulo ephilayo kaMauthausen
U-Ondense Manuel Alfonso Ortells wayengomunye wabaseSpain abangaphezu kuka-10.000 XNUMX abadingiselwa emakamu okuhlushwa futhi waba ngomunye wabambalwa abasele namuhla ukutshela ngakho. UManuel Alfonso Ortells ungumdwebi wamakhathuni. Kusindise impilo yakhe ukuyosebenza ehhovisi ngokwakha insimu nokwenza umdwebo wezithombe zocansi ngenhloso yokuthola isabelo sokudla.
Ubukhosi eGrisi, into yesikhathi esedlule
Amarinki okushibilika eStockholm
Isikhathi sasebusika eSweden sikhetheke kakhulu. Kwabaningi yisikhathi lapho ungasijabulela kakhulu ...
Kakhulu, idolobha elingalali neze
Idolobha lendabuko laseGibhithe ongalivakashela yiTanta, etholakala eLower Egypt, inhlokodolobha yombuso we ...
Ukudla IsiSwidi ngoKhisimusi
Ngobusuku obandulela uKhisimusi eSweden kulapho ukudla okuyinhloko kugcwele khona ematafuleni. Lokhu kuvame ukuba yi "julbord", ...
Amadolobha aseSweden eduze ne-Arctic Circle
IGallivare idolobha eliseLapland laseSweden elisendaweni yaseNorrbotten. Itholakala ...
EGibhithe cishe i-15% yabantu bangamaKrestu. Bayingxenye kuphela yomphakathi egubha ngempela ...
Izindawo ongazivakashela eningizimu ye-United States
Ufuna uhlu lwezindawo ongazivakashela esifundeni esiseningizimu ye-United States? Lolu uhlu lwezinto ezikhangayo ...
AmaNdiya Omdabu Odumile ase-United States
AmaNdiya Omdabu aseMelika ayingxenye ebalulekile yomlando namasiko aseNyakatho Melika. Kuqhubeka…
Kufakazelwe: AmaGypsies avela eNdiya
Ososayensi, ngokuhlaziywa kwe-DNA kwabantu abangu-13 abangamaRom eYurophu, bakwazile ukuqinisekisa umsuka wamaNdiya wamaRom
Amakilabhu & Amabha Ama-Gay ahamba phambili eMiami
IBoy Bar ivulwe kuze kube yihora lesihlanu ekuseni, iBoy Bar inegama elihle phakathi komphakathi wezitabane waseNingizimu Florida. Bangu…
Amanyuvesi Aphakathi Namuhla e-Oxford
I-Oxford ingaba yindawo efanelekile yezivakashi ezivakashela eNgilandi, njengoba leli 'dolobha lezipikili' lifushane nje ...
Iresiphi yamaMomos aseTibetan
Imikhosi emikhulu yaseGibhithe
IGibhithe izwe elimangalisayo lama-Arabhu elinemikhosi eminingi nemikhosi. Eminye yayo ingokomlando, eminye iyimikhosi yobuciko yesimanje futhi ...
ILatina, idolobha lase-Italy lesimanje ngokuphelele
ILatina, idolobha lesimanje elisungulwe nguMussolini
IPropylaea, ukungena kwe-Acropolis yase-Athene
Imigoqo ehamba phambili eCairo
ICairo idolobha okumele lisetshenziselwe uhambo oluya eGibhithe. Idolobha elihlanganisa ndawonye amadala ...
UMaji, izicathulo zokhuni zaseChina
Ikhofi laseSweden, isiko lokudla
ISweden, enabantu ababalelwa ezigidini eziyi-8,9, ngemuva kweFinland, ingenye yamazwe adla ikhofi emhlabeni….
Umhlaba Wevemvane; Umhlaba We-Butterfly e-Fort Lauderdale
Uma uhamba nezingane uye eFort Lauderdale, idolobha elisendaweni engama-3o km enyakatho neMiami, kufanele…
Ubhiya obudume kakhulu eNdiya
Imboni kabhiya waseNdiya iyachuma, futhi ukuvakashela eNdiya bekungeke kuphele ngaphandle kokuzama ...
Usuku lwegama, isiko lesiGrikhi
Usuku lwegama, isiko lamaGrikhi
Izindawo zokugcina izingane ezidumile eLondon
Enye yezindawo zokuzicwilisa emvelweni futhi uphumule ngaphakathi kwedolobha elinempilo laseLondon, yiClifton Nurseries,…
Iziphuzo zendabuko zaseSweden
ISweden, enyakatho yeYurophu, mhlawumbe yaziwa kakhulu ngomlando wayo wamaViking. Namuhla ...
Ukudla okulula kwesiSwidi
Isiko laseSweden lokupheka linikeza i-buffet yamasemishi enikezwa njengezidakamizwa ngezinsuku ezithile zonyaka, njenge
IColleoni Chapel, eheha eBergamo
IColleoni Chapel, okuheha eBergamo
Izimfihlakalo zemvelaphi yamaBerber
Noma nini lapho uvakashela iMorocco noma uhlola izindawo zayo ezithakazelisayo, imvamisa uthola izimpawu zempucuko yasendulo ...
I-Gastronomy yesifunda esiseningizimu
Sizokutshela ezinye zezici ze-gastronomy yesifunda esiseningizimu yethafa laseHungary. Kuyafana ...
Ubuhle beSalerno Cathedral
IS Saleno Cathedral
Amafilimu ama-5 abalulekile e-cinema yaseMorocco
I-athikili lapho siphawula khona ngamafilimu abalulekile ama-5 webhayisikobho yaseMorocco.
IScottish Highlands Tour
IHighlands (Highlands noma iScotland Highlands), iyisifunda esinezintaba esinendawo engama-25.784 km² enyakatho ye ...
Iziqhingi eziyinhloko zaseMorocco
I-athikili lapho sazi khona iziqhingi eziyinhloko zaseMorocco.
Izintshisakalo ngezwe lamaSulumane
I-athikili lapho sazi khona ukwazi okuthile ngomhlaba wamaSulumane.
I-Sarma (imiqulu ye-sauerkraut yaseCroatia)
Imvelaphi yalokhu kudla kwaseCroatia yiTurkey. Kunezindlela eziningi zokwenza i- "sarma" futhi ziyehluka ngesifunda. Izithako:…
Izindebe ezibomvu zabesifazane basendulo baseChina
Ukubuka izindawo zaseVenice
I-sestiere, omakhelwane, baseVenice
Imithetho emisha yabafokazi ePortugal
Imithetho emisha elawula ukungena, ukuhlala nokuphuma kwabokufika, izokwethulwa ngo-Okthoba. Umthethonqubo omusha uzobuye uhlanganise ...
Seffa, uswidi oyintandokazi wabancane
I-athikili esazi kuyo i-seffa, ubumnandi obuthandayo babancane.
Imininingwane Ethakazelisayo Nge-Gastronomy yase-Australia
Ngokuqondene ne-gastronomy yase-Australia, kufanelekile ukwazisa ukuthi ekuqaleni kwayo ijabulele ukuxhumana okukhulu nabaseBrithani, ...
I-Quandong: Izithelo zasendle zase-Australia
Esinye sezici ezigqamile maqondana nomhlaba wase-Australia ukuthi kukhethwa ukukhula kwe ...
Izindawo zokukhempa ePortugal
IPortugal iyizwe elincane elihlala engxenyeni eseningizimu-ntshonalanga yeNhlonhlo Yase-Iberia, emngceleni weSpain e ...
Amabhodlela akudala e-Chinese snuff
Amabhodlela ama-Chinese snuff
Izindlela zokupheka zesobho lesiPutukezi
Izindlela zokupheka zamaPutukezi zidumile emhlabeni wonke, zombili ngenani lazo lokudla, kodwa futhi nangokubaluleka kwazo okuphezulu ...
Imininingwane mayelana neParthenon
I-Lombardy, isifunda esihle kakhulu nesicebe kakhulu e-Italy
Imvunulo ejwayelekile yaseKrethe
I-octopus eyosiwe, okukhethekile kwesiGreki
I-octopus eyosiwe, iresiphi kusuka kokudla kwaseGreek
Amaholide kaZwelonke eNgilandi: Usuku Lempi
Kubonwa ngoSepthemba 15, i-Battle of Britain Day, yiholide lesizwe eligubha isikhumbuzo se ...